Todobaad gudahiis..Sidee U Badali Kartaa Nolashaada Oo dhan? | Xaqiiqonews
Todobaad gudahiis..Sidee U Badali Kartaa Nolashaada Oo dhan?
ma dareemeysaa in aad u baahantahay in aad wax ka badasho nolashaada? ma aaminsantahay in qaabka aad hadda u nooshahay in aysan ku dareensiineynin “raaxo nololeed”, haddii jawaabtaadu haa tahay, qormadani adiga ayey ku quseysaa.
Qoraalkani gaaban gudahiisa waxa aan ku dalxiisi doonaa buugaagtii ugu waaweyn ee faylasuufyada iyo culimada nafta ay ka qoreen “hagaajinta nolasha”.
Hagaag, marka laga hadlaayo horumarinta nafta,bugaagta aan ugu jeclahay waxaa ka mid ah buugga ciwaankiisu yahay “Ku raaxeyso nolaashaada” ee uu qoray Maxamed Al-cariifi iyo buugga kale ee “Nolashaada ku badal 30 maalmood gudahood ” ee uu qoray Ibraahim al-fiqi, ttaasina waa sababta labadni buug ay marjac ugu yihiin qoraalkani.
Aqbal Fikradaha dadka Ka soo horjeeda.
Dhibaato kama taagno in aan barano qaabka loo aqbalo fikradaha dadka kale, hase yeeshee arinka ugu weyn ee na dhibaya waxa uu yahy in aan aqoonsano in dadka kale ay xaq u leeyihiin in yeeshaan “fikradooda gaarka ah”
Marka aan ku galno dood “fikir kala duwnaasha ah” inta badan waxa ay ku soo dhamaataa xanaaq, aflagaado iy xitaa dagaal marar qaarkood.
Xalka ugu fiican ee mushkiladdan looga gudbi karo waxa ay tahay in aan aqbalno fikradaha dadka kale aaminsanyihiin, taasi macnaheedu ma ahan in aan ku raacno wax walbo, balse ogow in qofka kale xaq u leeyahay fikirkiisa gaarka ah.
Marka fikradda noocani ah aad ku dabaqda nolashaada waxa aad ogaan doontaa sida sixirka ah ee nolashaada u noqon doonto mid raaxo ah oo ka maran istareeska, xanaaqa iyo dagaal.
Qofna ha ka sugin in uu ku jeclaado
caqabaddani waa shabaq waqti lumis ah oo ay ku dhacaan dad badan, mararka qaarna waxa ay sababi kartaa burbur nololeed haddii uusan qofka dareemin halista “sugitaanka”.
Sidoo kale Aqriso..Sidee U Heli Kartaa Wax Walibo Oo Aad U Baahantahay?
Ha ka sugin qofna in uu ku jeclaado, qofna ha ka sugin in uu ku ixtiraamo, adiga noqo qofka bilaabaya in uu sidaa yeelo, ka dib waxa aad arki doontaa sida dadka ay u yihiin beer aad adiga leedahay taasi oo soo saareysa oo kaliya waxa aad ku beerato.
Marka aad dadka jeclaato, dib ayey kuu jeclaan doonaan, marka aad ixtiraamtana, ixtiraamkaada ayey kugu soo celinayaan.taasina waa qaabka ay u shaqeyso sirta “miisaanka Nolasha”.
Kama cabsanaayo in aan wax sugto, hase yeeshee waxa aan diidayaa in aa iska sugto wax laga yaabo in aysan dhaceynba.
Xikmad caan ah
-Ha sheeganin dhammeystirnaan
Dr. Gordon Flett oo ka tirsan jaamacadda York University , waxa ay dhameystirnaanta ku qeexday
–Dadku-iyaga is cajab geliya: dadkaasi oo had iyo jeer naftooda ku dhiba in ay u muuqdaan “kuwo dhameystiran”.
–Dadka dadka kale la dhacsan: kuwaasi oo waqti badan ugu baxa in ay dadka kale ka sugaan dhameystirnaan.
–Kuwa Bulshada iska Iibiya: kuwaasi waa kuwa had iyo jeer u maleeya in bulshada jeceshahy dadka dhameystiran.
Haddii aad ka mid tahay dadka noocan ah, waxaa muhiim ah in aad is weydiiso su’aashan: maxaa kugu qasbaya in aad sidaasi u fikirto?
Filashada Dhameytirnaanta, waa xaalad caafimaad darro taasi oo sababi karta Walwal, niyad jab iyo waliba cudurro kale oo nafsi ah.
Ma jiro qof bani’aadam ah oo dhameystiran sidaa awgeed hadii aad leedahay dhaqanka raadinta dhameystirnaanta, waxaa la joogaa waqtigii aad qaamuskaada ka tiri tiri laheyd arayga “dhammeys”.